musha - NDIRI YEMEN
zviuru zvevanhu zvakadzingwa
Mugwagwa, gungwa, Denga
Nzara nechirwere chemamirioni
Kushaikwa kwechikafu nemishonga
Akakuvadza uye akauraya vanhu
Please sarudza mutauro wako
A pfupiso of Yemen hondo
mu 2015 uye pashure Yemen kuti mutungamiri yokurega uye akapukunyuka kubva Yemen, chinhu dzisakarurama hondo Yemen wakabvunzwa nevanhu Saudi Arabia uye United Arab Emirates. Hurumende European uye American akaita chinonyangadza mhosva pamusoro kuzvidzivirira Yemeni vanhu umo zviuru nevana uye vanhuwo zvavo vakaurayiwa, nokutengesa zvombo uye kutsigira Saudi Arabia pane kudzivirira uye muyananisi panyaya iyi. Mhosva idzi havana chete kungoitirwa kurwiswa nemauto asi Saudi Arabia vakakomba pasi, mhepo, uye gungwa muna Yemen kuti kuvhara mukova zvokudya uye zvinodhaka kunyika iyo pangozi upenyu hwemamiriyoni evanhu. Maererano nemishumo nemasangano dzakawanda, mhosva idzi dzakave tsaona yakaipa kwazvo yevanhu mune makumi emakore apfuura uye zvakakonzera nzara uye yakatanga hosha dzakaita sekorera.
With nokubudiswa nhau uye mifananidzo mhosva idzi website iyi, nokuti akaedza kuzivisa vanhu mhosva idzi izvo Akaperekedzwa imwe boycott pamusoro Saudi wakakombama nhau masangano, kugumisa hondo iyi dzisakarurama nokuda aipopoterwa pasi pose.
Please kupinda email kufambirana nhau uye kutsigira Yemeni vanhu
Nzvimbo yevanhu here kubatsira vanhu veYemeni kupokana nemhosva dzeSaudi Arabia uye nekugumisa kukomberedzwa kwayo kwamakore mazhinji uko kwayakauraya hupenyu hwemamiriyoni
IAMYEMEN.COM © 2022 Kodzero Dzese dzakachengetedzwa.